Lihlehlisiwe icala elibhekene noMalema | News24
Lihlehlisiwe icala elibhekene noMalema
Bloemfontein – Lihlehliselwe umhlaka 25 Juni 2017 icala elibhekene nomholi we-EFF uJulius Malema ebeliseNkantolo yeMantshi yaseBloemfontein ngoMsombuluko.
Imholi we-EFF uvele enkantolo, wathweswa icala lokwephula umthetho owaziwa ngeRiotous Assemblies wango-1956 ngemuva kokuba ngomhlaka-16 Disemba 2014 amema abalandeli bakhe ukuba bathathe ngo-dli umhlaba ongasetshenziswa.
UMalema uvele phambi kwenkantolo yaseNewcastle ngoNovemba 7, ngecala elifanayo nokuyilapho ummeli wakhe, uTumi Mokwena, aveza khona ukuthi uMalema ufuna ukuwuphonsela inselelo eNkantolo eNkulu lo mthetho wangesikhathi sobandlululo.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe umshayeli wemoto ehamba uMalema
Ngaleyo ndlela lolu daba luphinde lwahlehliswa nasenkantolo yaseBloemfontein njengoba kusalindwe isinqumo ngesicelo esifakwe eNkantolo eNkulu.
Ummeli kaMalema utshele inkantolo ukuthi sebewafakile amaphepha eNkantolo eNkulu yasePitoli.
"Usuku olusabekelwe ukuba lulalelwe ngalo lolu daba umhlaka-27 Febhuwari 2017," kusho uMokwena.